Guddoomiye Altay wuxuu sameeyey bayaan ku saabsan Konya Metro iyo maalgashi kale | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia42 KonyaDuqa magaalada Altay wuxuu sameeyey warbixin ku saabsan Konya Metro iyo maalgashiyo kale
05 / 12 / 2019 42 Konya, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Metro, TURKEY
madaxweyne altay konya tareenka dhulka hoostiisa iyo maalgashiyo kale ayaa bayaan soo saaray
Duqa Magaalada Konya ee Magaalada Caasimada ah Ugur Ibrahim Altay, oo la kulmay xubno ka tirsan saxaafada Magaalada Konya ayaa ka hadlay ajandaha.
Ugaur Ibrahim Altay, Duqa Magaalada Konya ee Magaalo Weyn, wuxuu magaalada kula kulmay wakiilo ka kala socday hay'adaha warbaahinta gudaha iyo kuwa qaran oo qiimeeyay ajendaha. Degmooyinka World Association Co-Chairman of Konya iyo Turkey waa mid aad u muhiim ah marka la eego wakiilnimo ee ku nuuxnuuxsaday Altai Madaxweynaha, Konya Metro, Ardıçlı TOKI, la hadlay oo ku saabsan maalgelinta muhiim u Konya sida a site cusub warshadaha.
Seljuk Convention Center ee barnaamijyada abaabulan hadlayay Ibrahim Duqa Ugur ku Altay, United World Union of Degmooyinka iyo Magaalooyinka iyo Dawladaha Hoose Association (UCLG), xusayaa doortay Co-madax ka ah hawsha, waxa uu ahaa mid aad u muhiim ah marka la eego wakiilnimo ee Turkey iyo Konya ayuu yiri.
Waxaan goob joog ka ahaa xaqiijinta riyada Konya
Duqa magaalada Altay, oo ka warbixiyay xaaladda maalgashi ee ugu dambeeyay ee Konya, ayaa sheegay in ay goob joog ka ahaayeen in riyadeedii Konya ay la gashay qandaraaska tareenka dhulka hoostiisa. Isgoyska Fatah Street iyo Kışla Street, 10 kun oo qof oo ku dhow goobta jimicsiga 30 kun oo mitir murabac oo ku xigta dhismaha goobta ugu weyn ee dhismaha ayaa bilaabay in ay warbixin siiyaan Madaxweyne Altay, “Shaqada dhererka kiiloomitir ee 21.1 waxay noqon doontaa marxaladda koowaad ee xarunta 22. Dareenka waa maal-gashiga ugu weyn ee dadweynaha ee Konya. Bilyan 1 190 milyan oo yuuro ayaa la maalgashan doonaa. Iyadoo la tixgelinayo in Konya-Ankara YHT ay tahay maalgashi bilyan 1 bilyan doolar ah, waxaan fahamsanahay sida ay muhiimka u tahay shaqadu Konya. Shaqada waxaa loo qorsheeyay in la dhammeeyo sanadka 4. Iibsiga gawaarida waxaa fuliyay Dowlada Hoose ee Magaalada Konya. Muddadii ugu dambeysay, dhammaan iibsiga gawaarida Konya waxaa fulin doona Wasaaradda Gadiidka iyo Kaabayaasha. ”
KHUDBADKA SAFARKA SADDEXAAD TALO CUSUB
Duqa magaalada Altay wuxuu hoosta ka xariiqay inay rabaan inay sida ugu dhaqsaha badan u dhameystiraan howsha iyagoo siinaya dhibka ugu yar Konya inta lagu gudajiro dhismaha mitrooga. Sababtoo ah dhibaatooyinka ku-meelgaarka ah ayaa u soo bixi doona xalalka joogtada ah. Dhanka kale, howlo la wareegitaan ayaa socda si loo furo seddex waddo oo cusub oo ku yaal Karatay, Meram iyo Seljuks si loo yareeyo taraafikada. Sultan Abdulhamid Khan Street, Celaleddin Karatay Street iyo Ismail Ketenci Street waxay furi doonaan seddex wado oo kale si ay u abuuraan qorshe cusub. 2023, waxaan bilaabi doonaa adeegsiga Konya Metro. Waxaan rajeynayaa inay magaaladan faa'iido u yeelan doonto mar hore ”.
KONYA WAXA UU UGU BADAN YIHIIN WEBSITE
Duqa magaalada Altay ayaa sii waday khudbadiisa isagoo la wadaagaya horumar muhiim ah oo ku saabsan isu socodka Gaadiidka Wershadaha Old iyo Karatay. Halkaa marka ay marayso, Muwaadinkeena 2 bin 776 wuxuu sameeyay codsi hordhac ah iyo labadaba shuruudaha bixinta iyo mitirka laba jibaaran ee dukaamada. Ilaa dhamaadka bisha, TOKI wuxuu bilaabay inuu ku helo codsiyo rasmi ah bangiyada. Muwaadiniinta 2 bin 473 ayaa si rasmi ah u diiwaangashan. Muwaadinteenna horay loo diiwaangaliyay 303 ma aysan isdiiwaangalin. Waxaa lasiiyay waqti dheeri ah oo ah todobaadyo 1 waxaana muwaadiniinta 100 ay dalbadeen wax intaa ka badan. Boqolkiiba 8 Tallaabo muhiim ah ayaa la qaaday si loo hubiyo in dhammaan wadarta xuquuqda lahaanshaha ay iska leedahay shirkad ku taal gobolka halkaas oo Eski Sanayi iyo Karatay Sanayi ay dhaqaaqi doonaan. Waxaan rajeyneynaa in shaqooyinka dhismaha ay halkaa ka bilaabi doonaan guga. Waxaan rajeynayaa inaan dhisi doonno warshado u horseedi doonta mustaqbalkeena mustaqbalka dhow
DIIWAAN GELINTA GURYAHA 1057 EE ARDIÇLI Waxay siisaa MACLUUMAAD MUHIIM AH
Duqa magaalada Altay wuxuu sheegay inay fuliyeen mid ka mid ah ballanqaadyadoodii “Waxaa jiray baahi aad u weyn oo laga qabay guryaha bulshada ee Konya. Natiijadii wadaxaajoodka aan la leennahay TOKI, milkiileyaasha guryaha 1.057 ee Ard Arlı waa la aqoonsaday. Qandaraas ayaa markii ugu horeysay lagu qabtay magaalada Konya ee aagga Wershadaha abaabulan oo ay weheliyaan koox muwaadiniin ah, dad naafo ah, hawlgab ah, Shuhadada, carmallada, agoonta iyo ruug-caddaayada sababta oo ah guryaha bulshada. Dhismaha hoyga 1.057 ayaa hada socda. Dhismuhu si dhakhso leh ayuu u socdaa. Fursad uma lihin inaan dhigno aasaaska wixii aan qabanno. Sababta oo ah baahida sare, mashruuc labaad oo ah guri guri 1.000 ayaa sii socda. Waxaan rajeynaynaa in TOKI ay dib u bilawdo hawlgalkii guri labaad oo ah 1.000 oo ku yaal aagga Ardıçlı. Magaalo ayaa laga dhisayaa iskuulkeeda, masaajidkeeda iyo aagaga bulshada. Waxaan rajeynayaa in tani ay u anfacdo magaaladeena ”.
Waxaan u diyaarinay dhammaan noocyada shuruudaha
Konya sidoo kale wuxuu ku jiraa diyaar garow muhiim ah maalmahan, isagoo ku nuuxnuuxsaday Madaxweyne Altay, 746. Barnaamijyada xafladaha xuska sanadguurada Vuslat sanad guurada caalamiga ah, Konya wuxuu martigelin doonaa tobanaan kun oo booqdeyaal ah oo ka kala yimid daafaha dunida, iyo sidoo kale magaalo-weynta, waxay sameeyeen diyaar garow noocyo badan ah, iyo xafladda furitaanka bishii Diseembar 7 Wasiirka Deegaanka iyo Magaalooyinka Murat Institution, Wasiirka Dhaqanka iyo Dalxiiska Mehmet Nuri Ersoy iyo Wasiirka Caafimaadka Fahrettin Koca isagoo caddeeyay inuu ka qaybqaadan doono.
Arslan Waxay bixisaa macluumaad ku saabsan maalgashiyada jidadka wadooyinka ee Bursa
Duqa Magaalada Izmir Aziz Kocaoglu, oo maalgashi la samayn doono sanadka 2012…
Xarunta Akdağ Ski-ga ayaa kori doonta maalgelin cusub
Dekedda Mersin waxay kobcinaysaa Maalgashiyada
TCDD oo ku dhawaaqday war-saxaafadeed
TCDD waxay ku dhawaaqeysaa Warbixinta Shilalka Xadka Heerka
SAMULAŞ waxay muujisay shilalka ku saabsan tareenka
TCDD waxay soo saartay qoraal ku saabsan tareenka khasaaraya ee Elazığ
Madaxweynaha IBB Mevlüt Uysal oo ku dhawaaqay Shil
La xiriir konya si toos ah
Marxaladda koowaad ee Konya Metro